Amafutha omnqumo okwehla kwesisindo
Ngomzamo wokwehlisa isisindo, musa ukuzivimbela ukudla, into eyinhloko ukulinganisela ukudla kwakho ngokufaka imikhiqizo ekhuthaza izinqubo zamathambo emzimbeni. Enye yale mikhiqizo, izondlo zokudla zithinta amafutha omnqumo futhi zincoma ukuyisebenzisa ukuze ulahlekelwe isisindo. Indlela yokusebenzisa amafutha omnqumo wokushiswa kwesisindo esizokutshela kulesi sihloko.
Ngisho eminyakeni engaba ngu-6000 edlule, abantu bafunda ngezindawo ezinhle kakhulu zamafutha omnqumo. Owokuqala ukuqala ukutshala ama-oliva izakhamuzi zaseMedithera ikakhulukazi ezivela emazweni ase-Asia Minor naseGibhithe. Ngokuhamba kwesikhathi, izihlahla zomnqumo zaqala ukukhula kwamanye amazwe, futhi amafutha omnqumo abizwa ngokuthi "igolide elenziwe ngamanzi", futhi emazweni amaningi kanye nabantu kubonisa ukuchuma nenhlalakahle yezomnotho.
Ngenxa yalokho okuyigugu emzimbeni njengamavithamini. A, E, D, K, i-acids (i-oleic, i-stearic ne-palmitic), amafutha omnqumo akwazi ukusimamisa izinga le-cholesterol emzimbeni futhi avimbele ukubukeka kwezicubu. Ilulaza umsebenzi wegciwane lesisu, ikakhulukazi ama-pancreas, kanye nesibindi. Kodwa-ke, abantu, ngokukhushulwa kwezifo ze-gastroenterological, akufanele bathathe le mafutha ukulahlekelwa isisindo.
Ukusebenzisa kahle amafutha omnqumo ngenhloso yokulahlekelwa isisindo kuboniswa imiphumela yezilingo, ngenxa yokuthi kwafakazelwa ukuthi ama-acids angena ekubunjweni kwawo, aphuthumisa umzimba futhi anciphise umuzwa wendlala.
Ukuthatha kabili ngosuku ngepuni elilodwa lamafutha, emva kwenyanga ungakwazi ukuqeda 2 kuya ku-5 kg. Amafutha omnqumo angasetshenziselwa ukulungiselela izitsha ezihlukahlukene, kokubili kokuqala nangesibili, kanye nokugqoka amasaladi, futhi ngokwayo.
Emhlabeni kunezindlela zokupheka eziningi zokupheka ukudla eziqukethe amafutha omnqumo.
Ingabe ufuna ukuhlanza umzimba wakho wamafutha amaningi, i-toxins kanye ne-toxin? Khona iresiphi elandelayo ingeyakho. 300 amagremu eklabishi oqoshiwe, engeza ukhukhamba osikiwe, u-anyanisi uphinde uthathe izimpande zesilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi nge-grater, noma usike amahlumela esilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi, isaladi lesikasa usawoti, i-lemon kanye namafutha omnqumo.
Kodwa iresiphi yesaladi lesiFulentshi ngamafutha omnqumo, okuzosiza ukugcina isibalo esincane futhi isikhumba esihlanzekile, ebusika, lapho kungekho mifino nezithelo ezintsha. Ukuze wenze le saladi, udinga ukudiliza amaqabunga e-ulethisi noma ukusika, ukhethe iminqumo, bese ulungisa isaladi yokugqoka. Ekubunjweni, okubandakanya izithako ezinjalo: ama-50-60 amagremu amafutha omnqumo, kufanele abe yizinga elingaphansi futhi lingagcwaliseki, isigamu sesipuni sesipuni sesinaphi, ama-gramu angu-20 wejamu lemonti kanye ne-pepper enomnandi futhi agqoke isaladi.
Kubalulekile ukukhumbula ukuthi noma yiliphi isaladi elahlekelwa izakhiwo eziwusizo emva kwamahora ambalwa, ngisho noma lilungiselelwe emikhiqizweni ephezulu kakhulu, ngakho-ke kuphakanyiswa ukuba udle amasaladi kuphela asanda kulungiswa.
Ukuze ube nomphumela wokusebenzisa amafutha omnqumo, akudingeki ukuthi uyisebenzise kahle kuphela, kodwa futhi uyakwazi ukuyikhetha ngokufanele. Ukunambitheka, umbala kanye nephunga lamafutha kuncike endaweni yokukhula komuthi womnqumo, kanye nasezingeni lokuvuthwa kwemifino eqoqwe. Ngezithelo ezivuthiwe, amafutha anambitheka kancane futhi umbala ophuzi obala. Amafutha, awenziwe eminqumo aqoqiwe okuncane okuvuthiwe, anamehlo aluhlaza okwesibhakabhaka kanye nephunga elimnandi kakhulu.
Ngezici eziningi, ikhwalithi yamafutha omnqumo inqunywa indlela yokwenza lo mkhiqizo, amafutha omnqumo angagcini futhi ahlanjululwe, owokuqala nowesibili, ucindezelekile futhi ashisayo. Ikhwalithi ephakeme ibhekwa njengamafutha okushisa okuqala okubandayo, ngoba la mafutha awusizo ukushisa futhi awutholakali. Le mafutha yi-Olio extra-vergine di oliva. Leliyela ligcina zonke izakhiwo eziwusizo, ngaphandle kwale mafutha kunomnandi omuhle futhi kunambitha.
Ukuze udobe, ungasebenzisa amafutha ahlanzekile angenasiphelo futhi angenasidingo, kubizwa ngokuthi i-Olio vergine di oliva.
Futhi, ekugcineni, amafutha ashibhile asetshenziselwa ukupheka izitsha ezidinga ukushisa okuphakeme - la mafutha anegama, i-pomace amafutha omnqumo wenziwe ngekhekhe, ehlala ngemva kokucindezela kokuqala.
Isikhathi esihle sokunakekela isikhumba
Izimfihlo zobusakhula: izinyathelo ezine zokumisa iminyaka yobudala
Indlela yokuthola ithani elihle olwandle
Ubuhle nempilo yesikhumba: izikhambi zabantu
Izimfihlo eziyinhloko, njengoba njalo uhlale uncane futhi ukhangayo
I-elegant make-up ngesitayela sikaPaulina Andreeva: isigaba somsebenzi nesithombe
I-Brunette enamehlo aluhlaza
Isaladi enenyama enkukhu enkukhu
Ungaba nesibindi kanjani ngemva kwesahlukaniso?
Umqhele onokuvala isikhathi eside
Imithetho yokuxhumana nge-e-mail emsebenzini
Ingaphakathi ngesitayela sokwakha
Umsebenzi wabesifazane ekuphumeni komzali
I-almond pie ne-peaches
Ukudansa ukulahlekelwa isisindo
I-puree ye-pear ebabayo
Ukunakekela isikhumba esibucayi esomile
Ukupheka kwezitsha ezihlwabusayo nezempilo
Ama-pancake we-banana ne-poppy
Sisebenzisa ukulungiswa komshado okunengqondo
Ungakhetha kanjani i-depilator?
I-Autobiography yomdlali we-actress uMaria Aronova